के दीपेन्द्र देवयानीको ‘पागलप्रेमी’ थिए ? « रिपोर्टर्स नेपाल
के दीपेन्द्र देवयानीको ‘पागलप्रेमी’ थिए ?
दीपेन्द्रको यी महिलासँग नजुरेको विवाह
न्यादी हाइड्रोपावरले ४० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने
काठमााडैं, १७ साउन । न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति पाएको छ । न्यादीलाई
प्रभुराम शर्मा २६ साउनबाट कायममुकायम प्रधानसेनापति
काठमाडौं, १७ साउन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बालाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई २६ साउनबाट लागू हुने